Sarintany AutoCAD - Geofumadas
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-hanao fampitahana ireo fomba idiran'ny tahiry amin'ny alàlan'ny sehatra geospatial AutoDesk sy Bentley aho. Nampiasaiko ho an'ity aho: AutoDesk Civil 3D 2008 (Izay misy ny Sarintany AutoCAD) Sarintanin'i Bentley V8i AutoCAD Civil 3D 2008 Bentley Map V8i Connect: rakitra, ampifandraiso amin'ny Data… Mampifandray: Fikirakirana, data, ampifandraiso…
AutoCAD-Autodesk, jeospatial - GIS, Microstation-Bentley
Ny fisie rakitra, fantatra amin'ny anarana hoe .shp rakitra dia ho endrika quaternary amin'ny lafiny teknolojia fa tsy azontsika atao ny misoroka fa nampalaza azy ireo toy ny ArcView 3x. Izany no antony mbola ampiasana be azy ireo, hatramin'ny fari-piainan'ny ankamaroan'ny sehatra geospatial mba hiasa miaraka amin'izy ireo. ...
ArcView AutoCAD Map Bentley Systems sivily 3D DGN ESRI gvSIG OS shp
Ny maha mpikambana ao amin'ny AUGI MexCCA dia manana tombony betsaka, ny iray amin'izany dia ny fidirana amin'ireo fitaovana na fampianarana hianarana. Amin'ity tranga ity dia asehoko ny famintinana ireo fampianarana tsara indrindra amin'ny fampiasana ny 3D sivily ho an'ny làlana, ny topografia ary ny jeografia. Ny sasany dia horonan-tsary, ny sasany rakitra PDF. Mila misoratra anarana amin'ny ...
AutoCAD Map Autodesk sivily 3D dwg
AutoCAD-Autodesk, Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS, Engineering, topografia
Andao hazavao hoe iza ny AutoCAD Tsy miresaka momba ny AutoCAD Map na Civil3D, izay mifandray amin'ny serivisy OGC, fa ny tsimbadika AutoCAD tsotra 2007 no ho avy, izany hoe satria manana georeferance izy ireo. Andao hazavao izay ArcGIS: Tsy mifandray amin'ny Geodatabase na mxd voatahiry eo an-toerana miaraka amin'ny serivisy noforonina tamin'ny alàlan'ny nentim-paharazana ...
Na eo aza ny famoizan'ny AutoDesk ny fanohanany an'i Linux fotoana vitsy lasa izay, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanao ezaka hiverina izy, izany no antony nanambarany vao haingana fa mifanentana amin'ity fanambarana ity. Ny Rafitra Virtualization Application Citrix XenApp Application vaovao dia ahafahan'ny mpanjifa rindrambaiko AutoCAD Map 3D mamorona, manaparitaka ary mitantana ...
Vao nanambara plugin vaovao ho an'ny AutoCAD ny ERDAS izay mamela ny fidirana amin'ny sary (ECW sy JPEG 2000) amin'ny alàlan'ny protokol antsoina hoe ECWP. ECW dia endrika izay manana tombony maro, indrindra ny famoretana tsy misy fatiantoka kalitao, satria ny sary 200 MB tiff dia mety milanja hatramin'ny 8 MB; tena ...
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanao ireto dingana manaraka ireto izahay: Mamorona rakitra vaovao, manafatra teboka avy amin'ny fisie totalin'ny station ao Excel, forony ny polygon, omeo georeferany izany, alefaso any amin'ny Google Earth ary ento ny sary avy amin'i Google Earth mankany AutoCAD Hitanay teo aloha ny sasany amin'ireto fomba ireto an-tongotra, amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana azy ireo amin'ny AutoCAD ...
AutoCAD Map sivily 3D dwg Google Earth samy hafa GIS
AutoCAD-Autodesk, jeospatial - GIS, Google Earth / Maps, topografia
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny fanontaniana vitsivitsy izay matetika sendra ahy ao amin'ny statistikan'ny Google Analytics: ohatrinona ny vidin'ny AutoCAD? Aiza no hividianana AutoCAD? ... Ity misy lisitra fohy momba ny vokatra sy ny vidiny (tsy ao anatin'izany ny hetra amin'ny varotra) miankina amin'ny firenena tsirairay. Mihena ny vidin'ny fanavaozana Ireo dia vidiny rehefa mividy an-tserasera ...
Talohan'ny niresahantsika ny fomba fanafarana sary iray avy amin'ny Google Earth mankany amin'ny AutoCAD, andao aloha hojerentsika ny fomba hanafarana ny habakabaka ary hanaovana loko ity sary ity ary afaka mihaza amin'ity faritra 3D ity. Ny fika dia mitovy amin'ny hitantsika tamin'ny Microstation, mamorona fitaovana ary mamaha ny olana misy aza ny sary ...
AutoCAD Map Autodesk sivily 3D Google Earth